Fahasalamàna · Marsa, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fahasalamàna · Marsa, 2017
Tantara mikasika ny Fahasalamàna tamin'ny Marsa, 2017
Azia Afovoany sy Kaokazy 27 Marsa 2017
Ny 22 Martsa, tao Tbilisi, renim-pianakaviana iray niaraka tamin'ny zanany vavy nijoro teny amoron-dàlana no nofaohan'ny fiara iray. Maty teo noho eo ilay zazavavy 11 taona.
Fitsidihana Foibe Iray Fitsaboana Aretin-tsaina Ao Moskoa
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Marsa 2017
Vao haingana izay, nitsidika tovolahy iray tany aminà foibe fiahiana olon-dehibe ao Moskoa i Vera Shengelia, Rosiana iray mpanao gazety sady mpikatroka mafana fo ho an'ny fahasalamana ara-tsaina. Nampihorohoro azy ny zavatra hitany.
Nampiasa hala tahaka ireo olom-pirenena tsy faly. Nivezivezy tao amin'ny Twitter vao haingana ny soratra an-drindrina izay naneso ny tsy firaharahian'ny governemanta: "Toromarika: Aza maty noho ny homamiadana!"
Tatitry ny Media Japoney, Manamaivana Ireo Niharan'ny Fandefonana Tao Amin'ilay Trano Fikarakaràna Sembana Ao Sagamihara
Azia Atsinanana 24 Marsa 2017
Mbola manisy tsindrimpeo lehibe amin'ny fitadiavana izay antony nanosika ireo fandefonana ihany ny tatitr'ireo mpampahalala vaovao, na efa ilay nahavanon-doza mihitsy aza no manamafy hoe "....Tsara kokoa raha manjavona ireo olona manana fahasembanana.”
Afrika Mainty 17 Marsa 2017
Amerika Latina 10 Marsa 2017
Lalàna 09 Marsa 2017
Tokony ho eo amin'ny 2.100 kilaometatra any atsinanan'i Moskoa, voalaza fa matin'ny SIDA ny zazavavy telo taona . Indrisy ho an'ilay zaza fa nandà ny fisian'ny otrik'aretina VIH ny reniny,